Duufaanta Chapala oo maalmihii lasoo dhaafay bad Carbeed iyo badweynta Hindiya dul mareysay ayaa la sheegay in xoogeeda ay hada u weecatay dhinaca dalka Yemen gaar ahaan magaalada xeebta saaran ee Mukalah.
Aqoonyahanada dhanka cimilada ay sheegay in awooda Duufaantan ay hoos u dhacday balse weli ay tahay Duufaan xoog badan oo wadata dabeylo gaaraya 130km saacadiiba, Roob xoogbadan iyo onkod. Duufaanta ayaa la filayaa in awoodeeda hoos u dhacdo marka ay beriga kusoo dhawaato.
Caawa illaa beri oo Isniin ah ayaa la filayaa in duufaantan ku dhufato qeybo kamid ah xeebaha koonfureed ee dalalka Cumaan iyo Yemen, waxaana sidoo kale la filayaa in todobaadkan dabeylaha iyo roobka duufaantan ay gaaraan qeybo kamid ah gobalka Bari ee deegaanka Puntland wadanka Soomaaliya.
Sida muuqata duufaanta ayaa hada dhinac koonfureed u weecatay waxaana dhici karta inay gaarto qeybo kamid ah Waqooyiga Soomaaliya, deegaanada hada digniinta loo diray ayaa waxaa kamid ah dhulka Caluula illaa Xaafuun, hase yeeshee Duufaantan ayaa la ogaan doonaa marka ay gaarto xeebaha Yemen iyo jihada ay u leexato oo hadba saameyn ku yeelaneysa khasaaraha ka dhalan kara duufaantaasi.